Dubbiin jaraa akkana: ODP’n fayyaa qabdi jechuufis fayyaa guutuu irraa argaa hin jirru maraatteerti – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDubbiin jaraa akkana: ODP’n fayyaa qabdi jechuufis fayyaa guutuu irraa argaa hin jirru maraatteerti
Dubbiin jaraa akkana: #ODP‘n fayyaa qabdi jechuufis fayyaa guutuu irraa argaa hin jirru maraatteerti jechuufis maraatee kan huccuu darbitee fiigdu hin agarre.
Tanaaf dubbiin jaraa akka hoomachaa harka leessa nama hin dhaabanne. Tarii jarreen kunniin huccuu keessatti maraatinnuu kan jedhu keessa keenna jira . Namni utuu mana ofii hin qulqilleessin mana ollaa qulqulleessuun waan gatii qabu hin fakkaatu tanaaf jara tana ija shakkiitiin ilaalla
Har’a hooggantoota ishee asiif achi oofuu irraa kan hafe gaafii ummata oromoo deebisuu hin dandeenne. Ummanni oolee bulee bahuu bakka hin dandeennetti
Ilmaan oromoo bara #Kudha_jaha baratanii har’a yeroo daandii gubbaa jooraa oolanitti kaabiineef kaadiree hattuun alatti hojjattoonni mootummaa mindaa isaan itti kennaniin jiraachuu dadhabanii utuu cabaa kiraa manaa waan kafalatan dhabanii utuu jiruu jibbanii jiran. Jarreen kunneen qabsoo ummata oromoo harkaa butanii irratti qoosaa akka jiran ija kennaan argutti jirra. Guutumaan guututti oromoon nagaha hin qabu jechuun ni danda’ama
Oromoon harka qullaa falmatee jijjiirama tana fifuuyyuu har’a jijjiieama kana irraa bu’aan oromoon argataaru yoo jiraate. Abdii sobaan of sobee jiraachuu qofaadha
Boruu gaafiin koo naaf deebi’a utuu jedhuu boruu rakkoon koo naaf furama utuu jedhuu hawwii sobaatiin of sobee jiraataara
Inni guddaan kan nama qaanessuufii dhaaba kana irraa abdii nu kutaachiisu
Warroonni kalee diina waliin #Agaazii waliin ilmaan teenya miila ciraa cirsisiisaa ture
Obboleewwan teenya warra biyyee taasisee kumaatamni miila dhabee hiree dhabee utuu mana fincaaniifuu harka namaatiin geeffamuu
Warri balaa hamma kanaa raawwate warra hiree ta’ee ilmaan isaanii mana baruumsaa gatii olaanaan barrisiisaa laaqanaaf irbaata isaanii bifaan utuu nyaatanuu
Warri biyyaaf kalee dhakaan daandii cufaa ture dhakaa ciniinee jiraachaa jira
Kamtu warra biyyaati kamtu warra biyyeeti?. Gaafii tana waa maleef miti kan gaafadheef gaafiin tun ana qofatti gaafii hin taane ni amana namoota heddutti gaafii deebii dhabde taatee hafteerti. Abbaan ilma isaa sadi boolla takkatti awwaalate. Daa’imni haadhaaf abbaa boolla takkatti awwaalate. Obboleessi obboleettii ganama nagahaan waliin bahee guyyaa reeffa qabatee galeenii galgala awwaalate. Ijji oromoo imimmaan fuula ilmaan oromoo imimmaantu dhiqe
Gariin nama keenyaa carraa reeffa nama isaa argee awwaalachuu dhabe. Haati reeffa ilma ishee gubbaa akka teessu dirqamsiifamte. Maaltu kana qofa. Meeqatu utuu diina jalaa baqatu nyaata qurxummii ta’ee hafe kaa haati hamma ammaatti bakka jitu wallaaltee ammaa dhufaaf ijji isii ala ilaalaa jirattu. Meeqatu sahaaraa biyya ormaa keessatti utuu bishaaniif midhaan dhabee utuu deemu gogee hafee nyaata allaattii ta’e?
Warri haqaan falmate warra biyyeeti warri harka diinatti naqatee ilmaan teenya irratti yakka hammanaa raawwate warra biyyaa ta’ee yoo arginu
Oromoon har’as dhibamaadha jechuuf nu dirqamsiiseera
Yoo diqqate mootummaan qabsoo oromoo bute kunneen fayyaa ummataaf jecha warra yakka akkanaa dalage aangoo dabaleefii fooddaa #Televijiiniitiin ija ummata dura oofuu dhiisee yakka dalageef seera dura dhaabuu utuu qabuu teessoo nijjoireefii ummata garaan madaa dura oofuun tuffii mootummaan tun ummata keenna irraa qandu ifatti kan mul’isuudha
Burjaaja’uun maaliidha? Burjaaja’uun gaafii ummataa moggatti qabanii waan ummanni hin feene dalaguufii ummataaf hoogganaa ummanni jaalatu walitti buusuun ummata garee lamatti hiruun ummata walitti buusuudha. Mootummaan kunis wanni inni raawwataaru kanuma. Hoogganoota xiqqoo ummata biratti dhageettii qabaniifii xiqqoo ummataaf gurra bananii gaafii ummataa deebisuuf hiree argatanitti fayyadaman
Utuu oolamee hin bulamne bakka kaasuun gara biraatti darbaa ija ummataa jalaa dhoksaa turaniiru. Kanaaf ragaa hedduu kaasuu dandeenne
#Lammaa prezedaantummaa irraa kaasuu
#Suleeymasn_Daddafoo nama gaafii ummata isaa deebisuu danda’u miila fageessanii maqaa ambaasadaraatiin of irraa faheessanii biyyaa baasan. #Xayyiba_Hasan dhiibanii dhiibanii gidduu qaritti baasaniiru gorsituu jedhanii afaan ishee saamsaniiru ummata jalaa dhoksaniitu. Kun hundi hanqatee. Ammas gaafii ummataa moggatti qabanii ummata walitti buusuu itti
Taakkalaan erga kantiibummaa #Finfinnetti dhufee eegaalee jijjiiramoota hedduu dalagus garuu sababa warra isa waliin hojjatuufii sababa boogganoota isa gubbaa jiraaniif gaafiin gariin milkii dhabdee hafteerti. Ta’us #Taakkalaa yeroo kanatti kan jibbu yoo jiraate #Habashoota qofaadha. Har’a yeroo kana keessatti #Taakkalaa kaasuu jechuun kallattiinis ta’ee al kallattiin gaafii #Habashootaa deebisuudha
Dhukkuba guddaa nagxanyatti kan ta’e #Taakkalaan kantiibaa #Finfinnee ta’uudha
Taakkalaan #Master_olaanii mormee har’a abbaa aangoo ta’uudha kun ilmaan oromoof ciminna. Alagaaf immoo moo’atamuudha. Nuti #Adanech_Abebe yoo kantiibaa taate waan nu dhukkubsu hin qabu. Ta’us bakka dura jirtutti seenaa gurguddoo dalagdee jirti dalaguufis jirti. #Taakkalaniis akkasuma maaltu burjaajjii kana yeroo #Nafxanyaan ij
EPP jechuun ኢሠፓ Dargii irraa adda miti. Jijjiiramni ADWUI irraa gara EPP godhamus injifannoo bara 1991tti saboonni argatan uf duuba deebisuun sirna Dargii haaromsuu dha. Akka karoora EPPtti kana booda naannooleen sabummaa irratti jaaraman akka Oromiyaa, Sidaamaa, Kibbaa, Somaalee… ni diigamu jechuu dha. Abiyyi Ahmad Mangistuu lammaffaa tahuu waan barbaade fakkaata. Hima didaan ofiif bada malee abadan hin milkaahu!!
Maqaa dhaaba ABO(Adda bilisummaa Oromoo)deeggartaadhaan jibbaan haal-duree tokko male qeerroo bilisummaa Oromoo irratti cimaa jiraachuin bubbulee jira haa ta’u male
Naannolee Oromiyaa garaa garaa irratti adeemsi kun haala wolfakkaatuun dhiibbaaniifi adamsi qeerroo bilisummaa Oromoo(QBO) irratti daran cimaa deemaa jira. Keessattuu kan nama ajaa’ibu worruma kaleessa akka qabsaa’aatti qabsoo geggeessaa qeerroo isaan wojjin turan qaama mootummaa woyyaaneetti dabarsee kennaa turan har’a anatu qabsoo asiin ga’e jechuun of faarsantu feebisanii mootummaa amma ilmaan Oromoo irrarti ajjeechaa fi saamicha, gudeeddii, hidhaa, dararaa addaa addaa geggeessaa jiru
……OPDO dhuma kaleessa Oromoo gurguraa ture, har’a maqaa qofa geeddarachuun bilisummaa gabrummaa haguuggatee dhufee kana deeggaruun bilisummaan dhufee jira qabsoonis galma ga’eera jechuun hojii kaleessaatti deeba’uun har’as qabsoo qeerroon nafxanyaan nuhii jiruu biyya keenyarratti siyaasa hin gaggeeffattu jechuun falmatanu hamilee cabsuuf yaalamaas irratti hojjatamaa jira… .
Kanaafuu womti jala sararamee beekamuu qabu ……hanga Oromoon gaaffii jaarraadhaaf gaafataa ture deebii argatutti Abbaan biyyummaa Oromoo hanga murataa’utti, Oromoon hiree mataa isaa hanga murterffatutti, ajjeechaan Oromoo wallagga dhihaa, gujii booranaa, qimaant, harargee, dhaaf kutaa Oromiyaa hunda irratti xiyyeeffate hanga dhaabbatutti qeerroon qabsoo haala cimaadhaan itti fufa.